Siyaasi Max’med Qanyar Afrax oo ku dhintay magaalada Muqdisho [Warbixin]. – Shabakadda Amiirnuur
Uncategorized, Wararka Gudaha
Siyaasi Max’med Qanyar Afrax oo ku dhintay magaalada Muqdisho [Warbixin].
June 29, 2019 4:16 pm by admin Views: 76
Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waxaa saaka ku geeriyooday Max’med Qanyare Afrax oo muddo kusoo jiray siyaasadda dalka Soomaaliya ee ku dhisan dabadhilifnimada.
Max’med Qanyar ayaa sanadadii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay gudaha magaalada Muqdisho kadib markii uu ka fadhiistay siyaasadda sanaddii 2012.
Qanyare ayaa caan ka ahaa Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho wuxuuna kamid ahaa Hoggaamiya kooxeedyadii xasuuqa ugeystay shacabka Soomaaliyeed,dowladdii Federaalka KMG-ka aheyd ee uu madaxda ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayuu Qanyare kasoo noqday wasiirka ammaanka iyo xildhibaan.
Sanaddii 2004 ayuu Qanyare ka qeyb galay doorashadii madaxtinimada shirkii xerada Doofaareey (Mbaghati) wuxuuna ahaa musharixii sedaxaad ee codadka ugu badan ka helay xildhibaanada, sidoo kale isaga iyo tira xildhibaanno hoggaamiye kooxeedya ah ayaa Mudisho uga dhawaaqay Golaha samata bixinta kadib markii ay is khilaafeen Cabdullaahi Yuusuf.
Sanadihii 2005 illaa 2006 wuxuu kamid ahaa mas’uuliyiinta Isbaheysigii lamagac baxay Argagaxisa ladirirka ee dowladda Mareykanka ay qandaraaska ugasoo qaatay qab qabashada culimaa’udiinka iyo qof walba muslim ah oo diinkiisa ku dheggan.
Dagaal Ooge Max’med Qanyare iyo siyaasiyiin wali nool oo ay kamid yihiin Bashiir Raage iyo Muuse Suudi ayaa xiriir lalahaa sirdoonka Mareykanka ee CIA xilligii uu Bush ahaa Madaxweynaha Mareykanka.
Dagaal oogayaal ka qeyb qaatay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ayaa sidaan oo kale horay ugu geeriyooday waxaana kamid ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Cumar Xaaji Masalle oo taariikhd madoow uga tagay adduunka.